Guulaha Waxqabadka Dhinacyada Horumarka, N/galyada, Maamulka Saxar-tiran iyo Arimaha Bulshadaugu waawayn ee Xukuumada Maantu Ka taabogalisay markii ugu Horaysay Deegaanka. - Cakaara News
Guulaha Waxqabadka Dhinacyada Horumarka, N/galyada, Maamulka Saxar-tiran iyo Arimaha Bulshadaugu waawayn ee Xukuumada Maantu Ka taabogalisay markii ugu Horaysay Deegaanka.
shaki kuma jiro in aynu wadar ahaanteen shacabweynaha ku abtirsada DDSI meel kastooy joogaanba in aynu ka wada markhaati kacnay Guulaha waawayn iyo isbedelada Horumar,N/galyo iyo maamul suuban ee sanadihii ugu danbeeyay maasheeyay Guud ahaan Deegaanka iyo shacabka oo markii ugu horaysay dhadhansaday faaiidooyinka horumarineed iyo kobaca dhaqaale ee laga dhaxlo marka ay helaan hogaamin aragti dheer,cadaalada kana go'an tahay kor uqaadida nolosha horumarka shacabka iyo kaabayaasha dhaqaale degdegsiimana waxqabad ugaga jawaabta hadba baahiyaha ay bulshadu qabto.
Qaybta 1aad:- Guulaha waawayn ee ay Xukuumada maantu Ku talaabsatay Sanadihii ay Hogaanka Deegaanka Hanatay.
1- xukuumada maantu waata dhaqangalisay aasaasida Ciidanka Liyuupolice oo uu Deegaanku leeyahay
2-sal u dhigida Guud ahaan Deegaanka iyo Xuduudaha nabdgalyadii sirin-sirqowday beryo taasoo lagu soo gunaanaday hagardaamooyinkii arxandaro ee UBBO dhaxalsiin jirtay Shacabka.
3- Muujinta Doorka Qurbajoogta iyo abuurida xidhiidh wadatashi qotodheer oo ka dhex abuurma Xukuumada iyo Qurbajoogta islamarkaana 5ta Qaaradood ee Dunida kulamo wadatashi kula soo yeelatay Qurbajoogta.
4-Soo iibinta Riigaga Qoda Ceelasha Gunta dheer iyo Hirgalinta Mashaariicaha Qodida Ceel-biyoodyada,Biyo-xidheenada iyo Baraagaha Biyaha ee maasheeyay inta badan deegaanadii caanka ku ahaa Oonka iyo Omaska biyo la'aaneed ee quusta ka taagnaa helida biyo nadiif ah sida xarshin,marsin,yoocaaale,ararso iyo meeshii kula baxday magaca habaar waalid biyo la'aan darteed oo maanta ay burqanayaan biyuhu loona bixiyay Duco waalid.
5-xukuumada maanta ayaa Go'aan kalsooni buuxda leh hal mar ku ansixisay 16 Degmo kuwaasoo maanta baal ka galay mashaariicaha Horumarineed ee xawliga uga socda Deegaanka sidoo kalana waxaa la ansixiyay 4 mamul Magaalo.
6-xukuumada ayaa markii ugu horaysay ka suulisay deegaanka Qabyaaladii,eexdii iyo nin jeclaysugii hirgalisayna nidaamka dibucurashada shaqada iyo shaqaalaha
7- waa xukuumadii ugu horaysay ee ku hanata kalsoonida Shacabka dal iyo Dibadba dhanka ka warhaynta ilaa Ardaaga Geela,Horumarka,Shaqo-abuurka iyo Kor u qaadida dhigaalka iyo nolosha shacabka
8-waa xukuumad dhiirigalisay Nidaamka Xoolo-dhaqato beeralayda sida qorshaxa xukuumada ku cad la dagaalanka saboolnimada iyo gaajadaislamarkaana dibudejin uga samaysay agagaarada wabiyada iyo dooxooyinka taageero buuxdana ka gaysatay Diyaarinta dhul-beereedka,qalabka waxsoosaarka iyo Mashiinada biyaha soo tuura.
9- Dhanka Isgaadhsiinta waa xukuumadii ugu horaysay ee wakaalada isgaadhsiinta federalka ku dabagasha gaadhsiinta Mobilada iyo internetka dhamaan 68da Degmo iyo 9ka Gobol.
10-xukuumadii ugu horaysay ee ka qaybgalisa Qorshayaasha iyo siiyaalada Deegaanka Qaybaha bulshada fagaarayaal wadatshi ahna kula yeelata xarunta deegaanka iyo Gobolada lagaga wada arinsado marxaladaha iyo Qorshayaasha Deeganka.
11-Dhanka wadooyinka waa xukuumadii ugu horaysay ee hirgalisay wadada laamiga ah ee isku xidha Jigjiga Godey,laamiga shilaabo,wardheer,isuna furtay Gobolka Nogob iyo Degmooyinkiisa oo kala qoqobnaan jiray sanadihii hore loona sameeyay Buundooyin waawayn oo lagu kala goosho.
12- Dhanka Quwada Korontada:- waa xukuumadii ugu horaysay ee Gobolka Nogob ka dhaqangalisay helida quwada korontada 24ka saac sidoo kalana Degmada Godey iyo magalada Dh/buur oo laga hirgaliyay laydhka Solar Systemka.
13- Jigjiga iyo Qabridahar oo laga Dhisay Gagida Diyaaradaha oo Caalami ah.
14-Xukuumadu waxay u dhaadhicisay Miisaaniyadihii Horumarineed ee ugu badnayd dhaman Gobolada iyo Degmooyinka si looga taabogaliyo qaybaha horumarka bulshaduna shaqo abuur iyo nololmaalmeed uga helaan.
15- Xukuumadu waxay jidaysay dhiirigalisaynta ku dhaqanka xaqdhawrka saraynta sharciga iyo helid garsoor cadaaladeed oo ay bulshadu hesho.
16- xukuumadu waxaa ay intii ay jirtay kor u qaaday tayada Baris-barasho ee Deegaanka islamarkaana dhamaan Degmooyinka iyo Gobolada la gaadhsiiyay waxbarashada Dugsiga sare iyadoona markii ugu horaysay Luqada afka soomaaliga lagu daray Imtixaanada qaranka takhasus ahaana jaamacadaha Dalka lagu daray.
17-Xukuumadu waxay kor u qaaday Horumarinta magaalooyinka Siiba magaalada Jigjiga oo ay kaaf iyo kala dheeri yihiin Muuqaalkeedii Hore iyo Muuqaalka Qurxoon ee ay maanta leedahay
18-xukuumadu waxay hirgalisay wakaalada lacagaha yaryar iyo Amaahaha ee deegaanka taasoo shaqo abuur loogu sameeyay boqolaal ka mid ahaa Qoysaskii danyarta ahaa kuwaasoo maanta maaro u helay Nololmaalmeedkoodii.
19- Xukuumadu waxay dareen iyo qalbi fiican kula macaamilootay dhalinyarii maskaxda ay ka xaday UBBO ee lagu soo qabto dagaal ama isa soo dhiiba islamarkaana Doc ka galisay hadba kaalinta ay buuxin karaan.
20-Xukuumadu waxay markii ugu horaysay Deegaanka ka askuntay Television Caalami ah oo loogu magacdaray ESTV.
21-Xukuumadu waxay kor u soo Qaaday Dhaqankii iyo aataartii Deegaanku asalka u lahaa
22-xukuumadii ugu horaysay ee cafis u sameeysa Maxaabiista Nabad-diidka u xidhan hubaysane ama taageero kuu yahayba dibna xoriyadooda ugu soo celisa.
Kaliya waa Qodobada aanu isleenahay waa ay ugu waawayn yihiin balse waxqabadka xukuumada maantu wuu ka sal balaadhan yahay qoraalkan anagoona qaybta labaad soo daabici doona.